မြန်မာမုန့်များ | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
ဒါလေးက ကျွန်မရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့
မဆုတ်မနစ် ကျိုးနွံစွာ သင်ယူချင်စိတ်လေးရဲ့ ရလဒ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။
မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တုန်းက မှတ်မှတ်ရရ ပါရမီစိန်ဂေဟာ
ကားပါကင်ရှာရင်း စိန်ဂေဟာဘေးလမ်းမှာ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်နဲ့
ဈေးရောင်းနေတဲ့ မုန့်ပေါင်းသည်အဒေါ် ကြီးကိုတွေ့ပါတယ်။
အဖေအရမ်းကြိုက်တဲ့ မုန့်မို့ ပဲနဲ့ရော၊ အုန်းယိုနဲ့ရော ဝယ်မယ်ပေါ့လေ။
အဖေက ဆိုင်မှာနေသူဆိုတော့ အဖေ့ကို ဘာကျွေးချင်ချင် များများဝယ်ရတယ်။
သူတစ်ယောက် တည်း ဘယ်တော့မှ မျိုမကျဘူး။ သူ့ဘေးက လူတွေပါ
စားရလေမှ ကျေနပ်သူပါ။ ဒါကြောင့် များများဝယ်မယ်ဆိုတော့
အဒေါ်ကြီးက ဒါဆိုရင် သူဆန်နှစ်ကို ဆန်ခါချနေတုန်း
ခဏစောင့်တဲ့ သူလုပ်နေတာကြည့်ရင်း အမေပြောတာ သတိရသွားတယ်။
မုန့်ပေါင်းက သန့်ရတယ်။ မုန့်ချဉ်သွားရင် မရဘူးဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း
စပ်စုပါလေရော။ အဒေါ်ကြီးက ပထမ စိတ်တိုတိုနဲ့ လေသံမာတယ်။
နင်တို့ ပြန်ရောင်းစားမှာလားတဲ့။ မဟုတ်ပါဘူးအဒေါ်ရယ် ကျွန်မက
ဟင်းချက်နည်းရေးသူပါ။ အဓိက ဗမာ့အစားအစာ ရှားပါးတဲ့နေရာက
ကျွန်မ ကားဆရာကတောင် အမတော်တော်တောင်းပန်နိုင်တယ်။
ဘေးက ဈေးဝယ်တဲ့လူတွေလည်း ကြည့်လို့တဲ့။ မရှက်ပါဘူး။
ပညာရှာပမာ သူဖုန် စားပဲ ကိုက လိုချင်သူကိုး။
ခပ်မာမာ သင်နေရာက ဖြည်းဖြည်းချင်း လေသံပျော့လာတယ်။
သမီးတွေ၊ ဘာတွေခေါ်လာတယ်။ ကျိုးနွံချင်းရဲ့ ရလဒ်လေပဲလို့ တွေးမိတယ်။
ဆန်ကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်ရပါမယ်တဲ့နော်။ အဓိက မုန့်ပေါင်းဟာ
ဆန်နဲ့ရေပဲလိုပါတယ်။ သန့်နေမှ ရပါမယ်။
ကျွန်မနည်း (၂)မျိုး ရေးပေးပါမယ်။
မြန်မာ မုန့်ပေါင်း စစ်စစ်လေးလုပ်ဖို့မှာ အဓိက
မုန့်သားက ဆန်ရယ်၊ ရေရယ်ပဲ လိုပါ တယ်။
• မုန့်အခုရေ – ၂၅ ခုခန့်စာ
• ပေါ် ဆန်းဆန် – Rice Cooker ဆန်ချိန်ခွက် ၅ ခွက်
ဆန်ကို တစ်ညသိပ်ရေစိမ်ရပါမယ်။ ကြိတ်ဆုံမှာ ညှက်နေအောင် ကြိတ်ရပါတယ်။
Blender ကောင်း ကောင်းနဲ့ ညက်နေအောင်လည်း ကြိတ်နိုင်ပါတယ်။
အဝတ်ပါးတစ်ခုမှာ ထဲက ခပ်ကျပ်ကျပ်စည်း၊ အလေးဖိ၊ ရေစစ်ထားပါ။
ခပ်မခြောက်တခြောက်အနေရဖို့ကို ၈ နာရီကြာ စစ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
အဲဒါကိုမှ ဆန်ခါစိတ်စိတ်မှာ တိုက်ချကာ မုန့်သားမွမွကို ယူတာပါ။
ဆား အချိုစားဇွန်း တစ်ဇွန်း နယ်ထား ပါ။
• ၂ဝ ခုစာ ၂ လက်မခွဲ အချင်းရှိမုန့်
• ဆန်မှုန့် – ၂၅ဝ ဂရမ်
• ရေနွေးဆူဆူ – ၂ဝဝ မီလီလီတာ
• ဆား – အချိုဇွန်း ၁ ဇွန်း
ဆန်မှုန့်များကို ဇလုံထဲမှာထည့်ကာ ရေနွေးဆူဆူကို
ဖြည်းဖြည်းချင်းစီထည့်လိုက်၊ နယ်လိုက် (သစ်သားယောင်းမဖြင့်)
မွှေလိုက် လုပ်ပေးပါ။ ပထမ ခပ်စိုစိုအနေနဲ့ ဆန်သားမွှမွှလေးတွေ
ရလာပါမယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုံးလာပါမယ်။
အဲဒီလို လုံးထွေထွေဖြစ်နေတဲ့ ဆန်မှုန့်၊ မုန့်ညက်သားအတုံးလေးကို
လက်နဲ့ကိုင်လို့ ရလောက်အောင် မပူတော့ဘူးဆိုရင် ဆန်ခါတိုက်ရပါမယ်။
ဆန်ကာစိပ်ပေါ်မှာ ဖိချပြီး တိုက်ရတာပါ။ မုန့်အမှုန့် အစိလေးတွေ ခပ်မွှမွှရလာပါမယ်။
ဒါကတော့ မုန့်ပေါင်းအတွက် မုန့်ညက်သားကို ဆန်မှုန့်နဲ့ လုပ်တာပါ။
အခုကတော့ အုန်းယိုနဲ့ ပဲလွမ်းလိုလာပါပြီ။
တစ်ညရေစိမ်ထားတဲ့ ပဲလွမ်းကို နူးနေအောင် ပေါင်းပါ။ (ပြုတ်ပါ)
• ထန်းလျက်ဖြူ (ဆားထန်းလျက်) – ၅ဝ ဂရမ်
• အုန်းသီးဖတ် – ၁ဝဝ ဂရမ်
• ရေ – ၅ဝ ဂရမ်
ထန်းလျက်နဲ့ရေကို မီးအေးအေးနဲ့ ပျော်အောင် တည်ထားပါ။
ထန်းလျက်ရည်ကို စစ်ကာ (အမှိုက်တို့၊ သဲတို့ပါတတ်ပါတယ်။)
နည်းနည်းပျစ်လာရင် အုန်းသီးဖတ်ကို ထည့်မွှေပါ။
ခြောက်ခြောက် လေးဖြစ်လာရင် ရပါပြီ။ ထန်းလျက်မရှိရင်
သကြားလည်း သုံးနိုင်ပါ တယ်နော်။
မုန့်ညက်သားလည်းရပြီ။ ပဲနဲ့ အုန်းယိုရပြီဆိုရင်
မြန်မာပြည်မှာတော့ မုန့်ပေါင်းလုပ်ရန်အိုးကို သပ်သပ်လုပ်ထားပြီးသားပါ။
မုန့်ထည့်ရန် ခွက်ကလေးကလည်း အသင့်ရှိပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ အဖေ့ကို မုန့်ပေါင်းဆိုင်မှာ ဝင်ပေးရင် အဖေ့ရဲ့
ရေနွေးအိုးက အဖုံးရယ်။ အော်ဒါအတွက် အသုံးပြုတဲ့ စတီးရေခဲမုန့်ခွက်ရယ် မ,လာပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက် ဆိုင်သွားတော့ အဖေနောက်ကျောကို
ခပ်နာနာတစ်ချက် ရိုက်တာခံရပါတယ်။ မပြောဘဲ ယူမိတာကိုး။
ဆန်ကာတင်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပိတ်စပါးပါးလေးတစ်ခုပါ တင်လိုက်ပါတယ်။
မုန့်ပေါင်းက မထူမပါးနေမှ အကျက်ညီကာ စားလို့လည်းကောင်းတာမို့
စတီးရေခဲမုန့်ခွက်ဖင်လေးကို မုန့်သားထည့်ပြင်ရန် အသုံးပြု ပါတယ်။
( ၂ လက်မ အချင်းရှိပြီး အနက်ကတော့ လက်မဝက်သာသာရှိပါတယ်။)
အလားတူ ခွက်မျိုး၊ ဘယ်ခွက်မဆို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွယ်ဖို့ လွယ်ကူရာကို သုံးနိုင်ပါတယ်နော်။
ခွက်ကလေးထဲကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း မုန့်သားဖြည့်ပါတယ်။
ပဲလွမ်းတင်မယ်ဆို ရင် မုန့်သားကို ခပ်ပြည့်ပြည့် များများလေး
ခပ်ဖွဖွသိပ်ပြီး ဖြည့်ပါ။ ပဲတင်ပြီး မုန့်သားထဲ အနည်းငယ်ဖိထည့်ကာ
ရေနွေးဆူဆူပေါ်က ပိတ်ပါးပေါ်ကို မှောက်လိုက်ပါ။
မုန့်က ပိတ်ပါး ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင် မုန့်ပေါ်ကို ပိတ်ပါးလေး ပြန်အုပ်ပေးပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါ။
မုန့်ပေါင်းက ရေနွေးငွေ့လုံဖို့လိုတာမို့ ဘေးက အဝတ်စိုတစ်ခုပါ ပတ်လိုက်ပါတယ်။
အကယ်၍ အငွေလုံတဲ့အိုးဆိုရင်တော့ အဝတ်စိုပတ်စရာမလိုပါဘူးနော်။
၂ မိနစ်ခန့်ပေါင်းပြီးရင် မုန့်ပေါင်းလေး အဆင့်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
အုန်းယိုနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် မုန့်သားကို နည်းနည်းပဲထည့်ပြီး
အလယ်မှာ နည်းနည်း ခွက်စေကာ အုန်းယိုကို ထည့်၊
မုန့်သားပြန်အုပ်ကာ ခပ်ဖွဖွဖိပြီး အထက်ပါအတိုင်း ပေါင်း ပေးရင် ရပါပြီ။
တချို့က ဆီလေးနည်းနည်းပုတ်ပြီး နှမ်းထောင်းလေးနဲ့ စားကြပါတယ်။
နှမ်းထောင်း ကတော့ နှမ်းလှော်နဲ့ဆားကို ခပ်ဖွဖွရောထောင်းတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
ပူပူနွေးနွေး မြန်မာ့မုန့်ပေါင်းလေးကို အဆင်ပြေပြေ လုပ်စားနိုင်တယ်ရှင်။
အောင်ဗလကြော် ဒီမုန့်က ကျွန်မအလွန်ကြိုက်သော မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိမ့်ဆိမ့်အိအိလေးနဲ့ စားကောင်း လွန်းလှပါတယ်။ ဗမာမုန့်များဟာ တကယ်ကောင်းလွန်းလှတာမို့ ကျွန်မကတော့ ကိတ်မုန့် တစ်တုံးနဲ့ လဲမယ်ဆိုရင် ဗမာမုန့်ကိုသာ အားပါးတရစားမဲ့သူပါ။ ကြည့်ရအောင်နော်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၄လက်မ ခွဲ အချင်းရှိမုန့် ၅ ချပ်စာ)
• ဆန်မှုန့် – rice cooker ဆန်ခွက် ၂ ခွက်
• ကောက်ညှင်းမှုန့် – rice cooker ဆန်ခွက် ခွက်တစ်ဝက်
• ကြက်ဥ – ၂ လုံး
• ရေ – rice cooker ဆန်ခွက် တစ်ခွက်ခွဲ
• ဆား – အချိုဇွန်း တစ်ဇွန်း
• ဆော်ဒါ (ဆိုဒါ) – အချိုဇွန်းတစ်ဝက်
• သကြား – စားပွဲတင် ၆ ဇွန်း
ဆန်မှုန့်၊ ကောက်ညှင်းမှုန့်တို့ကို ဇလုံတစ်ခုမှာ ရေကို နည်းနည်းစီထည့်မွှေပေးပါ။
သကြားကို ရေနွေး ၂ ဇွန်းစာနဲ့ဖျော်၊ ဆိုဒါနှင့် ကြည်ဥကို ခေါက်ထည့်ပြီး ခုဏက ဖျော်ထားသော မုန့်နှစ်ရည်ထဲသို့ ရောကာမွှေပေးပါ။ မုန့်ပွလာစေရန် ရေစိုဝတ်အုပ်ပြီး ၄ နာရီခန့်ထားပေးပါ။
၅ လက်မ အချင်းရှိ non stick ဒယ်အိုးကို (ပုံမှာပြထားသလို) ဆီအနည်းငယ်ဆိုရုံမျှ ထည့်ပြီး အပူပေးပါ။ မုန့်နှစ်ရည်ကို ခပ်ပြည့်ပြည့်ဖြည့်ပြီး အဖုံးခဏအုပ်ထားပါ။
၂ မိနစ်ခန့်ကြာရင် မုန့်ကို တစ်ဖက်သို့ လှန်ကာ အပူပေးပါ။ ညိုရောင်သမ်းလာရင် ရပါပြီ။
အောင်ဗလမုန့်ကို တချို့က သကြားရည်ကျိုပြီးသား သကြားပွင့်များကပ်ကာ စားကြ ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ သကြားနဲ့ပဲ တို့စားလိုက်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းစား လည်း ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ အလွန်ကောင်းသော ပွပွ အိအိ အောင်ဗလကြော် မုန့်လေးပါ။
ကြက်ဥမုန့်သိုင်းခြုံဆိုတာလေးကလေ မြင်ရင်လည်း စားချင်စဖွယ်
ချစ်ဖို့အလွန် ကောင်းပါတယ်။ ပါဆယ်ထုပ်လေး ထုပ်ထားသလိုပဲ
နောက်တစ်ခုက မြန်မာ့ရိုးရာ စစ်စစ် မုန့်ကလေးပေါ့။
ဟိုတလောက ဘုရားပွဲဈေးတန်းမှာ သွားတုန်းကလည်း တွေ့လိုက် တယ်။
လုပ်ထားတာလည်း စားချစ်စရာ သန့်သန့်ပြန်ပြန့်လည်းရှိတယ်။
ကိုထက်လည်း ကြိုက်တယ်ဆိုပြီး ဝယ်စားကြတယ်။
၉ မိုင် ရှမ်းပွဲတော်မှာ တွေ့တာပါ။ လန်ဒန်မှာတုန်းကလည်း
ခဏခဏ လုပ်စားဖြစ်တာလေပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ Facebook မှာတော့
လုပ်နည်းတင်ပေးဖူးပါတယ်။ Food Magazine မှာတော့ ခုမှ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဗဟုသုတအနေနဲ့ ကြက်ဥမုန့် သိုင်း ခြုံသည်က ပြောလိုက်တာလေ။
သူ့မုန့်ဆိုင်ထဲမှာ ကြက်ဥပြုတ်လေး မနှဲလေးတင်ထား တာတွေ့လို့ မေးကြည့်တော့
‘မမနှဲလေးက ကြက်ဥပြုတ်တင်ပေးရတယ် ဆိုင်ရောင်းကောင်း အောင်
သူက ကြက်ဥပြုတ်၊ ဘဲဥပြုတ်ကြိုက် တယ်’ဆိုတော့
မဒီဒီက ‘ဒီဒီလည်း ကြက်ဥပြုတ်ကြိုက် တယ် မမနှဲလေးနဲ့ တူတယ်’ဆိုလို့
မုန့်သည်ကြီးလည်း တအားရယ်ရောလေ အဲဒီလို အရှုပ် လေးလေ။
နေရာတကာပါတာ။ ကဲမုန့်သိုင်းခြုံလုပ်ရအောင် . . . ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (တစ်နည်း) (၁)
• ကြက်ဥ (သို့) ဘဲဥ – ၃ လုံး
• ဆား – နည်းနည်း
• ဂျုံမှုန့် – ၁၃ဝ ဂရမ်
• ရေ – ၆ဝ ဂရမ်
• ဆိုဒါ – နည်းနည်း
• ကောက်ညှင်းမှုန့် – ၁၂ဝ ဂရမ်
• ဆန်မှုန့် – ၃ဝ ဂရမ်
• ဘဲဥ – ၃ လုံး
၁။ ပထမ (၁)နည်းက အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကြက်ဥ၊ ဆား၊ ဂျုံမှုန့်၊ ရေ၊ ဆိုဒါ တို့ကို
ရောမွှေပေးပါ။ အရမ်းပျစ်နေရင် ရေနည်းနည်းထပ်ထည့်ထားပြီး မိနစ်အနည်းငယ် ကြာရင်
ဒယ်အပြားကို ဆီသုတ်ခါ မုန့်ပါးပါးထည့်ပြီး အလယ်မှာ အိုးယိုထည့်ပြီး ခေါက်ပြီး ရင် ရပါပြီ။
၂။ ဒုတိယ (၂)နည်းက ကောက်ညှင်းမှုန့်၊ ဆန်မှုန့်၊ ဆား၊ ဘဲဥ၊ ရေ၊ ဆိုဒါထည့်
ရေကိုလည်း မပျစ်မကြဲ လိုသလို ထပ်ချိန်ထည့်ပေးပါ။ ဒယ်ပေါ်ဆီသုတ်ကြော်က အုန်းယို ထည့်ပြီး
မှတ်ချက် မုန့်သိုင်းခြုံဟာ ဆဋ္ဌဂံလိုပုံမျိုး ခေါက်မှ လှပါတယ်။ အိမ်မှာလုပ်စား ရင်တော့
အုန်းယိုလုပ်တာကတော့ . . .
၃။ အုန်းသီးအဖတ်လေးတွေကို သကြားအချိုကို လိုသလောက်ထည့်ပြီး
အပူပေး ပြီး သကြားပွင့်ပျောက် သည်အထိ လှော်ထားတာကို ပြောတာပါ။
ကျမ အမျိုးသားက ပဲအမျိုးမျိုးကြိုက်တယ် ကျွန်းကျောင်းသား\_အညာသားစစ်စစ်။ ကျမ လုပ်တဲ့ မုန့်တွေမှာ သူက ပဲနဲ့လုပ်တဲ့ မုန့်ဆိုအလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ တခြားဟာတွေ အားမပေးဘူးလား ဆိုတော့ အမှန်အကန်ပုံမှန်စားသုံးသူပါပဲ။ ဒီ မုန့်လေးမှာသုံးတဲ့ ready madeဆန်ပြားဖတ်လေးကိုတော့ ကျမ က facebook မနီဆိုတဲ့အမရဲ့ စိတ်ကူးကို ယူပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံခြားက အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် မုန့်လုပ်စားရာမှာ လွယ်ကူနေဖို့ လိုတာကြောင့် ဒီ ready made ဆန်ပြားလေးတွေက နေရာမရွေးဝယ်လို့လဲရနေတော့ သုံးရန်အလွယ်ကူဆုံးပါ။ တနေ့ကတော့ snow white khaing က black bean နဲ့လုပ်ထားတာတွေ့လို့ black bean ပါထပ်ထဲ့ရေးပေးလိုက်တယ်။ ဗမာပြည်မှာတော့ကတော့ ပဲကတ္တီပါ နဲ့ လုပ်ကြရတာပါ။
-rice paper ၁၀ ရွက်
– red kidne (သို့) black bean ၁ဘူး 400 g
-ဆား ဇွန်းဝက် ( အချိုဇွန်း )
-ထန်းညက် ၃ခဲ ( အချိုကြိုက်ရင်ပိုထဲ့ပါ)
ဗူးပဲကို သုံးတာမို့ ပဲပြုတ်ရတဲ့အချိန်သက်သာပါတယ်။ ပဲကို ခဏရေစစ်ထားပါ။ ပဲတွေက နူးညံ့ပြီးသားမို့ ဇွန်းတချောင်းနဲ့ ဆားထဲ့ ပြီး ဖိခြေလိုက်ပါ။ ထန်းညက်ကို အရည်ဖျော်( သို့) အသေးလေးများတုံးပြီးရော မွှေပေးပါ။
ဒီအနေမှာတင် သုံးလို့ရပေမဲ့ ကျမက ပဲ အနံ့မွှေးချင်လို့ microwave မှာ ၁မိနစ်စီ ထဲ့ တခါပြန်မွှေ အဲလိုမျိုး ၅ မိနစ်လုပ်ပါတယ်။ (မွှေးနေတာပဲ ) ရိုးရိုးနည်းနဲ့အိုးတလုံးထဲရေခံပေါင်းလို့လဲရပါတယ်နော်။ ခဏပေါ့ ။
ရေနွေးပူပူကို ဗန်းတဗန်းမှာထဲ့ ၁ရွက်ချင်းစီ 2မိနစ်ခန့်စိမ် ပြန်ဆယ်ကာ ပန်ကန်တချပ်ပေါ်တင်ပြီး အလယ်တွင် ပဲကို တင်ပေးပါ။
( ကျမ ကတော့ ပဲမတင်ခင် rice paper မျက်နှာပြင်ကို kitchen towel လေးနဲ့ ရေခြောက်အောင် လိုက်တို့လိုက်တယ် ) ပြီးရင်ခေါက်ပြီး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ။
အုန်းသီးခြစ်၊ အုန်းဆီချက်အနှစ်နဲ့ လဲတွဲစားနိုင်ပါတယ်. ဆန်ပြားကို စိမ်တဲ့ ရေနွေးဟာ နွေးတယ်ဆိုတဲ့အနေထက်နဲနဲပိုပူရပါမယ်။ ဆန်ပြား ကျက်မှစားလို့ကောင်းတာမို့ အလျင်စလိုမထုတ်စေချင်ပါဘူး။ အဆင်ပြေလွယ်ကူစားသုံးနိုင်ပါစေရှင်။
ဒီမုန့်စိမ်းပေါင်းကတော့ ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှ မဟုတ်ပဲ သီရိလင်္ကာ လူမျိုးများမှာလဲ စားကြပါတယ်။ တရက်က ကျမအိမ်က ဘေစင်ထဲမှာ ပင့်ကူ အကြီးတကောင်ဝင်နေပြီး အပေါ်ပြန်တတ်တိုင်း မရလို့ အဲဒီထဲပဲနေနေရပါတယ်။ ကျမ ကလဲ ပုရွတ်ဆိတ်တောင် နဲနဲကြီးရင် ကြောက်သူမို့ ကိုထက်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တော့ သူက အိမ်နဲ့တော်တော် ဝေးဝေးကို ရောက်နေပြီ။ အဲဒီတော့ ဒီပင့်ကူတကောင်နဲ့ ဒီအိမ်ထဲ ထိုင်မရ ထမရဖြစ်နေရတာမို့ အိမ်ရှေ့ကသီရိလင်္ကာ လူမျိုးများဖွင့်ထားတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်မှာ သွား အကူအညီတောင်းရပါတယ်၊ ပိုင်ရှင်မိန်းမက ကျမနဲ့ခင်နေသူမို့ သူ့သားလေး ကို လိုက်သွားပြီးကူ ဆိုခိုင်းလိုက်တယ်။ ကလေးက ၁၃ နှစ် မျက်နှာစပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ လိုက်ဖယ်ပေးရှာတယ်။ သူ့စိတ်ထဲ ငါတောင်မကြောက်တာ ဒီမိန်းမကြီး မကြီးမငယ်နဲ့ ကြောက်တတ်လိုက်တာဆိုပြီး နေမှာပေါ့။ ကျမက သူ့ကို မီးဖိုထဲ ပိတ်ကိုထားလိုက်တယ်၊ မတော် ဟိုပင့်ကူက သူ့လက်က လွတ်ပြီး ကိုယ့်ဆီပြေးလာမှဆိုပြီးလေ။ ဟိုကလေးကပင့်ကူကို ခြံထဲ လွှတ်ပေးပြီး ငါ့လဲ တံခါးပြန်ဖွင့်ပါအုန်းဆိုမှ ဖွင့်ပေးတာ။ သူ့ကိုပြန်လိုက်ပို့ပြီး သူအမေကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောမှ သူစားနေတာ ငါတို့ မုန့်စိမ်းပေါင်းနဲ့ တူလှချည့်ဆို စိတ်ဝင်စားဟန်ပြ ဟိုက စားမလားမေးတော့ အရှက်မရှိ ဝင်မြည်း ဒါဘယ်လိုလုပ်သလဲမေးနဲ့ အဲသလို ရဲတင်းပြီး ရထားတဲ့နည်းပေါ့။ သူတို့က မုန့်သားမှာ အုန်းသီးဖတ်လေးတွေတောင်ပါသေး။ ကျမက မအားလပ်တဲ့ အိမ်ရှင်မများအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး လွယ်ကူအောင် နည်းကို ပေါင်းစပ်ပြီး ရေးပေးပါမယ်။
-ဆန်မှုန့် အကြမ်း course rice flour ၃၀၀ ဂရမ်( ဆန်မှုန့်ကြိတ်ထားတာတွေ အလွန်မှုန့်နေရင် မကောင်းပါ)
-အုန်းနို့ ဦးရည်၁၀၀ မီလိမီတာ ( အပျစ်ကိုဆိုလိုပါတယ်)
-ထန်းညက်ရေ ကျို ၁၀၀ မီလီမီတာ
-ဆား အချိုဇွန်း ၁ဇွန်း
-ရေနွေး ဆူဆူ ၁၀၀မီလီလီတာ
စစချင်း ဆန်မှုန့်များကို ဇလုံတခုမှာ ထဲ့ပြီး ရေနွေး ဆူဆူကို နဲနဲချင်းစီ ထဲ့လိုက် သစ်သားယောင်းမဖြင့် မွှေလိုက်လုပ်ပေးပါ။ မစိုတစိုဖြင့် လုံးထွေးမနေသော ဆန်သားမွှမွှရပါမယ်။ ဆား ထဲ့ရောပေးပါ။ အဲဒါကို ကျမက ရေနွေးဆူပြီးသားပေါင်းအိုးမှာ ၁၅ မိနစ်ခန့် ပေါင်းပါတယ်။
ဒီအဆင့်မှာ ကြာကြာပေါင်းနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်
ရလာပြီဆိုရင် တော့ ခဏ အအေးခံပြီးမှ ဆန်မှုန့် ၁ဝက်ကို အုန်းနို့ ကိုနဲနဲစီရောပြီး လိုက်မွှပါ။ နောက် တဝက်ကို ထန်းညက်ရေဖြင့် ရောမွှပေးပါ။ လက်ဖွဖွဖြင့်မွှေပေးပါ။ ဆုပ်နယ်လိုက်ရင် မုန့်သား မလှပဲ အခဲပုံဖြစ်သွားပါမယ်။
အဲဒီနောက်မှာ တော့ ဇကာပေါ်ဖိချပေးရပါမယ်။ မုန့်အမှုန့်လေးများရအောင်ပါ။ ကျမက blender ထဲ ထဲ့ကြိတ်ပါတယ်။ ပုံပါအတိုင်း ခပ်မွှမွှလေးများရလာပါမယ်နော်။
ကျမကမုန့်ပေါင်းအိုးအစား ဖန်ဇလုံ အသေးကို သုံးပါတယ်။ အုန်းနို့အရော မုန့်သားအမွှများကို အရင်ထဲ့ ထန်းညက် အသားကို အပေါ်က ထဲ့ပါတယ်။ (ဖိသိပ်မထဲ့ရပါ)
အပေါ်က အဝတ်ပါးတခုကို အုပ်ပြီး ပေါင်အိုးမှာပါတဲ့ ဇကာပေါ် မှောက်ရက်အနေဖြင့်တင်ကာ အောက်က ရေများများခံပြီး ၄၅ မိနစ်ခန့်အလုံပိတ် ပေါင်းပါတယ်ရှင်။
ပေါင်းပြီးရင်တော့ ပန်းကန်တချပ်ပေါ် မှောက်ချကာ နှမ်းထောင်းတို့ အုန်းဆံခြစ်တို့ဖြင့် ပူပူနွေးနွေးမွှေးမွှေးလေးစားလို့ရပါပြီ။ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေရှင်။
အုန်းနို့ ၊ ထန်းညက် အပျစ်အကျဲပေါ် မူတည်ပြီး ပေါင်းချိန်ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ ပေါင်းပြီးရင် ဘေးနားတွေမခြောက်အောင် ဆီသုတ်ထားတာ (သို့) ပတ်ထားတာတို့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကောက်ညှင်းဆနွမ်းမကင်း ( ၈”၊ ၆”၊ ၂.၅” ဘန်း)
ကောက်ညှင်းဆနွမ်းမကင်းက တော့ အလွန်လွယ်ပါတယ် စားလို့လဲကောင်းပါတယ်။ တချို့က ရွှေထမင်းနဲ့ ကောက်ညှင်းဆနွမ်းမကင်းကိုမှားတတ်ကြပါတယ်။ လုပ်နည်းက ရွှေထမင်းက လုပ်နည်းက အလွန်လွယ်ပါတယ်။ ဒီ ဆနွမ်းမကင်းနည်းကတော့ နဲနဲလေးအလုပ်ရှုပ်ပေမဲ့ ပွဲလယ်တင့်ပြီးစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်ပါနော်
-အုန်းနို့ ၁ဗူး ၄၀၀ မီလီလီတာ
-သကြား ၁၀ သား
ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရေ တညစိမ်ထားပေးပါ။
ကောက်ညှင်းများကို နူးကာနီး အထိပေါင်းထားပါ။( ပေါင်းတာများသွားရင် မုန့်ဖုတ်တဲ့အခါ မုန့်သား အတုံးမထွက်ပဲ ပြဲနေတတ်ပါတယ်) ပေါင်းတယ် ဆိုပေမဲ့ကျမက လွယ်လွယ်ပဲ ထမင်းချက်သလို ရေထဲ့အဖုံးအုပ်ချက်တာပါ။ အိုး တလုံးထဲမှာ အုန်းနို့ ၃၀၀မီလီကို သကြားနဲ့ ပျစ်လာသည်အထိရော အတူရောကြိုပေးပါ။ ပေါင်းထားတဲ့ ကောက်ညှင်းများရောမွှေပြီး ရေခန်းလာ ပြီးပျစ်လာသည်အထိ မွှေပေးပါ။
ပျစ်လာရင် ဆီသုတ်ပြီး ဘန်းထဲကိုထဲ့ကာ မျက်နှာပြင် ညှိပါ။ ကျန်အုန်းရည်များကို မျက်နှာပြင်ပေါ်လောင်းကာ ဘိန်းစေ့ကြိုက်ရင်ဖြူးနိုင်ပါတယ်။ (သကြားဖြူးလဲရပါတယ်)
ကြိုတင် အပူပေးထားသော အလယ်ဆင့်တွင် အပေါ်မီး များများ အောက်မီး နဲနဲဖြင့် ၂၅၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ဖြင့် မိနစ် ၃၀ ခန့် ဖုတ်ပေးပါ။ မုန့်ကျက်မကျက်ကိုမုန့်အလယ်ကို ဓားသေးသေးဖြင့်ထိုးကြည့်လို့ မုန့်သားမကပ်နေရင် မုန့်ကျက်ပါပြီ။ အပြင်ထုတ်ပြီး အေးလာရင် လှီးစိတ်စားသုံးလို့ရပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးကောက်ညှင်းထုပ်ကို ကျမ လုပ်ချင်လို့ ရခိုင် ငှက်ပျောသီး ရန်ကုန်ကို မှာရပါတယ်။ ရခိုင်ငှက်ပျောကမှ ကျက်ရင်နီသွားပြီး ပိုချိုတာကို။ နိုင်ငံခြားက လူတွေ တော့ plantain banana ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးကို အခြမ်းလေးများခြမ်းထားပေးပါ။ ကျမ ကတော့ ကိုထက် မေမေ ကိုထက်ပြန်လာတုန်းက ထဲ့ပေးလိုက်တာကိုသုံးတာပါ.
-ကောက်ညှင်းဆန်ကောင်းကောင်း-.၂ ခွက်( ဆန်ချိန်ခွက်)
-ရခိုင်ငှက်ပျောသီး- ၅ လုံး
-ဆား- ၁ ဇွန်း(အချိုဇွန်း)
ကောက်ညှင်းဆန်ကိုတည ကြိုတင်ရေဆေးစိမ်ထားပါ။နောက်တနေ့မှာကောက်ညှင်းတွေကိုရေစင်အောင်စစ်ထားပါ။ ကောက်ညှင်းကို ဆာ့း ဖြင့်နယ်ထားပါ။ ငှက်ပျောသီးကို အခြမ်းလေးများခြမ်းထားပေးပါ။
ငှက်ပျောဖက်ကို မီးကင်ထားပါ။ နို့မို့ရင် ထုပ်တဲ့အခါ ဖက်က မာဆတ်ဆတ်နဲ့ကွဲထွက်လာတတ်ပါတယ်။
ဖက်ကို နှစ်ရွက်လောက် ထပ်ပြီး ကောက်ညှင်း၁ဇွန်း (စားပွဲတင်) တင်ပါ ။ အပေါ်က ငှက်ပျောသီးစိတ်ကိုတင်ပါ။ ကောက်ညှင်း ၁ ဇွန်းနဲ့ ထပ်
အုပ်ပါ။ နှီးကြိုး(သို့) ကြိုး တမျိုးမျိုး တင်းတင်းစည်းရပါမယ်
ပီးရင်တော့ ပြုတ်မည့်အိုးထဲကို စီထည့်ပြီးရေကိုကောက်ညှင်းထုပ်လေးများ မြုပ်အောင်ထည့်လိုက်ပါ။ကောက်ညှင်းထုပ်ပြုတ်ရာမှာ အပြုတ်နာလေ ကောက်ညှင်းထုပ်အသား ကောင်းလေပါဘဲ။ ရေကို ၂ခါလောက် ထပ်ဖြည့်ပြီးပြုတ်ပါ။
ပြုတ်ပြီးသွားရင်တော့ ဖက်ကိုခွါ ကာ လှီးစိတ်ပြီး အုန်းသီးနဲ့ သကြား ဖြူးကာ စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
မုန့်ကြွပ်ကြော် (အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ၊ နန်းကြီးသုတ် စတာတွေအတွက်သုံးရန်)
ဒီ မုန့်ကြွပ်ကြော်ကို ကျမ ဆိုင်မှာ ဘယ်လိုကြော်လဲ လာလာမေးကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ အရမ်းခက်တဲ့ ဒီနည်းလေးကို ရေးပေးလိုက်ပါပြီရှင်။ စတာပါ လွယ်လွယ်လေးပါနော်။ မြန်မာပြည်မှာလို အလွယ်ဝယ်လို့မရတဲ့နေရာမှာ ဒီနည်းလေးက အသုံးဝင်လှပါတယ်။ ဂျုံခေါက်ဆွဲကို သုံးရင် ကြော်တဲ့အခါ ကျစ်သွားမှာမို့ အသုံးမတဲ့ပဲ စားလို့လဲမကောင်းပါဘူး၊ တကယ်က ဆန်ခေါက်ဆွဲက ဆီပူနဲ့ ထိရင် ကျွတ်ပြီး ငါးမုန့်ကြော်လိုပွလာတာပါ။ တကယ် မုန့်ကျွတ်ကြော်အရသာအတိုင်း လိုရာသုံးနိုင်ပါတယ်
-ဆန်ခေါက်ဆွဲခြောက်အပြား (flat rice stick, flat rice vermicelli or noodle)
ဆီ များများကို အဝကျယ်ကျယ် ဒယ်အိုးထဲ ထဲ့ အပူပေးပြီး ဆနွမ်းမှုန့်ကို များများထဲ့ပေးပါ ။ဆီဝါဝါလေး ဖြစ်နေပါစေနော်။ နောက်ပြီး ဆန်ခေါက်ဆွဲချောက်လေးတွေကို ချိုးခြေ၍ ဖြစ်စေ ဒီတိုင်းဖြစ်စေ ထဲ့ ကြော်ပေးပါ။
ငါးမုန့်ကြော် ကြော်သလိုပွတက်လာပါမယ် ။ ဟိုဖက်ဒီဖက် လှန်ကြော်ပြီး အကျက် ညီညီကြော်ပါ ။ အဝါရောင်သန်းရင် ဆီပူက ဖယ်ကာ ဆီစစ် ဇကာပေါ်စစ်ထားပါ။ အေးရင် လေလုံတဲ့ ဗူးထဲ သိမ်းထားရင် အကြာကြီးခံပါတယ်။ လိုသလိုသုံးပြီး အဆင်ပြေကြပါစေ။
ဒီဆီချက်ခေါက်ဆွဲကို နည်းပေးသူကချက်ကျွေးတာမဟုတ်ပဲ နည်းပဲပေးတာဖြစ်လို့ မုံရွာသူစစ်စစ်တွေက ကျမရဲ့ ဆီချက်လေးကို မှန်တယ်မှားတယ်ရယ်လို့ ဒေါသမထွက်ဖို့ကြိုတောင်းပန်းပါရစေ။ မမှန်ရင်လဲ နည်းပေးသူ အပြစ်လို့သတ်မှတ်ပါရှင့် 😛 မှန်တာမှားတာနောက်ထား ကျမတို့လင်မယားကတော့အသဲစွဲသွားအောင်ကို ကြိုက်ပါတယ်နော်။ နည်းပေးတဲ့ မုံရွာသူ စစ်စစ်ရယ်လို့အမြဲ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာပြောတတ်တဲ့ မဇင်ကိုဒီ post လေးနဲ့ အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောပါရစေ။
-ဝက်သားအသားချည်း ၅၀၀ ဂရမ်
-ကြာညို ၄ဇွန်း( စားပွဲတင်) sweet soy sauce
-ဂျုံခေါက်ဆွဲပြား ( ၅ပွဲစာ)
-ကြာညို ၅ဇွန်း (စားပွဲတင်)
-ကြက်သွန်ဖြူ ၃ဥ (ဓားပြားရိုက်ပါးပါးလှီး)
-ရေနွေးပွက်ပွက် ၃ဇွန်းခန့် (စားပွဲတင်)
ပထမဆုံး (sauce အရည်လုပ်ရန်) ဆိုတာလေးများကို ရောစပ်ထားပါနော်။
ဝက်သားကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်ဖြင့်နယ်ပြီး ခဏအကြာ ရေမြုပ်အောင်ထားပြီးပြုတ်ပေးပါ။ နူးလာပြီဆိုရင် ဆယ်ပြီးအအေးခဏခံထားပါ။ ကိုင်နိုင်လောက်အောင်အေးပြီဆိုရင် ကြာညို နဲ့ သကြားတို့ကိုဆုပ်နယ်ထားပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်ခန့်နယ်ပြီးရင် ဆီဒယ်အပူတွင် ရဲနေအောင်လှိမ့်ကြော်ပေးပါ။ ဝက်သားအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
ဆီချက်လုပ်မဲ့ ဂျုံခေါက်ဆွဲကို ဆီပူတွင် ကျွတ်နေအောင်ကြော်ထားပါ။ ပဲပင်ပေါက်လေးများကိုရေနွေးဖျောပေးထားပါ။
ကျမကတော့ခေါက်ဆွဲကိုမစားခင် ကျက်ရုံပြုတ်ပြီးရေအေးဆေးချထားပေးပါတယ်။ ကျက်ရုံပြုတ်ခိုင်းရ ခြင်းအကြောင်းရင်းက စားခါနီးမှာ ရေနွေးလေးနဲ့ ပြန်စိမ်မှာမို့ပါ။ ခေါက်ဆွဲအေးအေးကြီးစားလို့ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲနော်
ပန်ကန်တချပ်မှာ ရေနွေးပြန်စိမ်ထားတဲ့ တပွဲစာခေါက်ဆွဲဖတ်လေးများကို ရေမစစ်တစစ်အနေနဲ့ ထဲ့လိုက်ပါ။
sauce အရည်ကို ထမင်းစာဇွန်းနဲ့ ၃ဇွန်း ခန့်ထဲ့မွှေပေးပါ။ ဆီစိမ်း၊ပဲပင်ပေါက်လေးများ၊ ကြက်သွန်မြိတ်များဖြူးကာ မုန့်ကျွတ်လေးများကိုလဲချေထဲ့ပေးပါ။ အသားပြားပါးပါးလှီးလေးများတင်ပြီးရင်ပွဲပြင်ပြီ ပြီဖြစ်ပါတယ်။